Cover Star - အေးဝတ်ရည်သောင်း - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
Cover Star - အေးဝတ်ရည်သောင်း
21 March, 2019, 01:43 PM
Written by ကေလာင္-ေက်ာ္မ်ိဳးႏိုင္
Make up- Lin Lin (Make Up Artist)
Dress - Kaung Myat ( Haute Couture)
Jewellery - She Shines Gems & Jewellery
Location - Parkroyal Hotel Yangon
ဒီတစ်ပတ် 8days ရဲ့ Cover Star ကတော့ ပေါက်စီလို့ လူသိများ ပြီး အေးသောင်းလို့ ပရိသတ်တွေ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ အေးဝတ်ရည် သောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ကျင်းပတော့မယ့် အကယ်ဒမီဆုပေး ပွဲမှာလည်း မုန်းစွဲဇာတ်ကားနဲ့ ဇာတ် ပို့ဆုကို တစ်ကြိုပေးခြင်းခံရသူတစ် ဦးလည်း ဖြစ်တာကြောင့် သူမရဲ့ အကယ်ဒမီရင်ခုန်သံတွေကို ပရိ သတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။
Q . အကယ်ဒမီပေးပွဲနီးလာ ပြီဆိုတော့ ရင်ခုန်သံ မြန်နေပြီ လား...
A . ကားမတင်ခင်က ရင်ခုန်သံ က ပိုစိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ နောက်နေ့ ရုံတင်တော့မယ် ဆိုတော့လေ။ ပေါက်စီရဲ့ ပထမဆုံးရုံတင်ဇာတ် ကားလည်း ဖြစ်သလို၊ ပေါက်စီပထ မဆုံး ပြန်ရိုက်တဲ့ကားလည်း ဖြစ် တာကြောင့်ရယ်၊ ကိုနေတိုး၊ မဖွေး တို့လို ပါဝင်တဲ့သူတွေကလည်း ကိုယ့်ထက် အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူ တွေ၊ ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူတွေဆို တော့ အဲဒီတုန်းက စိတ်ပူခဲ့တာက ကိုယ်ကျန်ခဲ့မှာ၊ ပေါက်စီကြောင့် ကားပျက်သွားမှာ တအားစိတ်လှုပ် ရှားခဲ့ရတော့ အခုလှုပ်ရှားမှုက အဲဒီ လောက်မရှိသေးဘူး။ ပွဲမရောက် သေးလို့လည်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အခုထိတော့ ခံစားမှုနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှား မှုက ရုံတင်ခါနီးအချိန်လောက်ကို မ ကျော်သေးဘူး။
Q . မုန်းစွဲရိုက်တုန်းက အကယ် ဒမီရနိုင်တယ်ဆိုပြီး အားစိုက်ခဲ့တာ မျိုးရှိလား...
A . ရိုက်တုန်းကတော့ အကယ် ဒမီအတွက်ဆိုတဲ့စိတ် မရှိဘူး။ အဲဒီ တုန်းက မကြာဥဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ပဲ ဖြစ်ချင်တာ။ လှဖို့လည်း စိတ်မကူး ဘူး။ အဲဒီတုန်းက အေးသောင်း လည်း မဖြစ်ချင်သလို ဘယ်သူမှ လည်း မဖြစ်ချင်ဘူး။
Q .အကယ်ဒမီ အေးဝတ်ရည် သောင်းဖြစ်သွားရင် ဘာတွေပြောင်း လဲသွားမလဲ...
A . ပေါက်စီအတွက်တော့ ဘာမှ မပြောင်းလဲဘူး။ နာမည်အ ရှေ့မှာ စာလုံးလေးလုံးပိုလာမှာပေါ့။ ပေါက်စီအတွက် အကယ်ဒမီမရခင် ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရပြီးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အမြဲ အပြည့်ကြိုးစားမှာဆိုတော့ ဘာမှ ပြောင်းလဲမှု မရှိပါဘူး။
Q .ဒီနှစ်အကယ်ဒမီကို ဘယ် သူ့ကို ရစေချင်လဲ...
A . အကယ်ဒမီကို အကုန်လုံး ကိုတော့ ရစေချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အ ကယ်ဒမီက နတ်ကြီးတယ်လေ။ ပေါက်စီ ဘယ်လောက်ပဲနာမည် ထွက်ထွက် ရချင်မှလည်းရမှာလေ။ မျှော်လင့်ချက်နည်းတာ အကောင်း ဆုံးပဲ။ မုန်းစွဲကားမှာ တစ်ဆုရရ၊ နှစ် ဆုရရ ပျော်တယ်။ ပေါက်စီလည်း တခြားကားတွေမှာ စိတ်ထဲကမှန်း ထားတဲ့ ဇာတ်ပို့၊ ဇာတ်ကားတွေ လည်းရှိတော့ ရရင်အရမ်းပျော်မှာ ပါ။ ဘယ်သူပဲရရ ကိုယ့်မိသားစုထဲ က ဆုရသလိုပဲ ပျော်မှာပါ။
A . ကိုမင်းသက်စံ စီစဉ်တာပါ။ အရောင်တောက်တာ မကြိုက် တော့ အဝါဘက်မျိုးတော့ ပြော ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုကြီးက ဘယ် လိုစီစဉ်ထားလဲ မသိဘူး။ လက်ဝတ် လက်စားက ဇွဲထက်က စပွန်ဆာပေး ထားပါတယ်။
Q .ပရိသတ်တွေကို ပြောချင် တာက...
A . အကယ်ဒမီမှန်းပေးတဲ့ ပရိ သတ်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီရခဲ့ရင်လည်း ပရိသတ်နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ မလျှော့ဘဲ ဝမ်းသာ မှာပါ။ မရခဲ့ရင်လည်း မှန်းပေးတဲ့အ တွက်နဲ့တင် ကျေနပ်တယ်။ နောက် လုပ်မယ့် အလုပ်တွေအတွက်လည်း ပိုပြီး အားရှိတယ်။ ကိုယ်စွမ်း Óဏ် စွမ်းရှိသရွေ့ ကြိုးစားသွားပါမယ်။